> Resource > Utility > Ilowday Password Gmail, dib u helaan Waxaa Hadda
"Ilowday aan password Gmail oo doonaya in ay si deg deg ah u helaan" Waxay leeyihiin dhibaato la mid ah, sax? Ha welwelin. Waxaa jira laba siyood oo aad dib u hesho illowdeen password Gmail.
1. Ilowday password Gmail? Google caawiyo dib waxaad ka helaysaan
Marka hore , waxaad tagtaa iridda Gmail account login ah, guji "ma xisaabtaada heli karaa?" link sida image hoose.
Labaad , Dooro dhibaatada aad qabtid: waxaan halmaamay aan password. Markaas galaan username aad u isticmaasho inay la soo wareegto si ay Google. Tani waxay noqon kartaa cinwaanka aad Gmail, ama waxaa laga yaabaa in cinwaanka email kale oo aad la xiriira xisaabta. Saddexaad , nooca captcha ah in ay sii wadaan. tallaabo hore , aad heshay doonaa saddex doorasho aan dib ugu heli illowdeen password Gmail: Hel code xaqiijinta ah oo ku saabsan telefoonka, helaya via farriin qoraal ah ama soo wac telefoonka ah , ka jawaab su'aasha ammaanka, ama aad u hesho dib link sirta ah ee aad email sare.
Ceshano illoobay password Gmail la Gmail password finder ah
Weli ku fashilantay in ay dib u helaan aad forgtten password Gmail marayo habka rasmiga ah? Ma ahan dhamaadka dunida. Waxaad weli dib-u helin karaan qalab finder sirta ah: Wondershare WinSuite 2012 . Dhab ahaantii, marka aad gasho si aad Gmail, xisaabta iyo sirta lagu si toos ah u soo xusuustay diiwaanka on your computer ama disk adag. Tani Aamin Gmail password finder kaa caawin kara si aad u ogaato sirta ah ee aad Gmail in 3 tallaabo, iyadoo aan loo eegayn aad isticmaalayso Windows 7, XP ama qoraalkii kale Windows qoyska.
Step1. Orod barnaamijka oo taga si password / finder ee muhiimka ah
Marka aad barnaamijka, rakibi iyo waxa maamula on your computer, ka dibna tag Password ah & Key Finder menu dusheeda. Waxaad heli doontaa interface ee soo socda. Guji "Finder Password" si aad u hesho illowdeen password Gmail.
Step2. Dooro password Gmail / Google Talk
Finder password wuxuu kuu ogol yahay in la helo sirta ah ee Windows Live ID, Outlook, Access Password, Gmail, mail Yahoo, EC. Dooro "Gmail / Google Talk Password", oo uu ku biiro "Next".
Step3. Raadi si aad forgtton Gmail password
Hambalyo! Illowdeen password Gmail waxaa laga helaa oo halkan soo bandhigay. Waxaad ku qori kartaa ama u dhoofiyaan si aad u computer u badbaadiyay.
Fiiro Gaar ah: Waa sharci darro inuu ka soo kabsado Gmail lambarka sirta ah ee dadka kale haddii aadan haysan ogolaansho ah ka qofkan. Qalabkan waxaa loo KALIYA loogu talagalay in ay isticmaalaan leh inuu ka soo kabsado iyaga u gaar ah Gmail xisaab Markay Halmaameen ama laga badiyay password Gmail.